Global Voices teny Malagasy » Shina: Mpanao Bilaogin-dahatsary Nanampy Ankizy Miasa Hiverina An-Tsekoly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2018 17:57 GMT 1	 · Mpanoratra Meng Zhang Nandika Vero
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sendikà, Tanora, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Xu Alun, mpanao horonantsary bilaogy efa zokinjokiny mamerimberina fa “Ny marina no fahefana”, namoaka andiana horonantsary manafintohina nataony irery ao Ku6.com , tranonkala fizarana horonantsary malaza ao Shina. Tao anatin'ny fandrakofana mitohin'ny tantara telo, nampiseho tantara mampihetsimpo an'ny ankizy telo mpitatitra arintany ao Biji, tanàna kely ao Atsimo, miaraka amin'ny fisoloana vava mahomby eo amin'ny aterineto an'ny vondrona QQ  nalamin'i Guo Jun, mitady hivezivezy eo anivon'ny mponina ny tantara, namoha ny fanahian'ny vahoaka. (Eto tsindrina mba hijerena ny horonantsary miaraka amin'ny dikanteny Anglisy) 
Eo amin'ny olona antsasan'ny tapitrisa no nanindry ny horonantsarin'i Alun nanomboka ny namoahany ny asany voalohany an'ny ankizy mpitatitra arintany tamin'ny Febroary. Niaraniasa tamin'ny Ku6.com, nanomboka nanao fanomezambola ho an'ireo ankizy telo ny mpampiasa ny aterineto mba hanampiana azy ireo andeha any an-tsekoly , ary farany, teo ambanin'ny tsindry mitombo avy amin'ny fisoloana vavan'ny Aterineto, nanapa-kevitra ny hirona ao amin'ny fandaharana fanampiana ny governemanta an-toerana, izay nampisondrotra ny antony. Mpanao bilaogy horonantsary Alun, ny mpamorona ny hetsika manontolo, nanatrimaso an'ny fandehan'ny fanampian'ny governemanta ary namoaka horonantsary roa manan-danja tao amin'ny bilaoginy.
.Fanehoankevitra eo amin'ny horonantsary bilaogin'i Alun :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/24/115319/
 (Eto tsindrina mba hijerena ny horonantsary miaraka amin'ny dikanteny Anglisy): http://dotsub.com/films/_14/
 Niaraniasa tamin'ny Ku6.com, nanomboka nanao fanomezambola ho an'ireo ankizy telo ny mpampiasa ny aterineto mba hanampiana azy ireo andeha any an-tsekoly: http://zt.ku6.com/juanzhu/
 horonantsary bilaogin'i Alun: http://v.ku6.com/u/2714304